Iska Ilooba Neymar Aniga Ayaa Diyaar Ah - Ousmane Dembele Oo Qaaday Talaabo Aan Looga Baran & Arrintan Oo Ka Farxisay Madaxda Barcelona - Gool24.Net
Iska Ilooba Neymar Aniga Ayaa Diyaar Ah – Ousmane Dembele Oo Qaaday Talaabo Aan Looga Baran & Arrintan Oo Ka Farxisay Madaxda Barcelona
July 9, 2019 Apdihakem Omer Adem
Da’yarka xulka qaranka France iyo kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa ku dhaqaaqay talaabo aan looga baran mudooyinkii hore ee uu kooxda soo joogay taas oo farxad gelinaysa madaxda sarre ee kooxdiisa.
Dembele ayaa qaaday talaabo soo jiidasho leh oo uu ku muujiyay sida uu koritaan u samaynayo waxaana uu kooxdiisa weydiistay inuu kusoo laabto tababarka kooxda toddobaad kahor wakhtigii loo qorsheeyay.
Sida laga soo xiganayo ‘Cadena SER’, Ousmane ayaa doonay inuu kaligii tababar qaato toddobaad kahor wakhtiga ay kooxdiisu bilaabayso isku diyaarinta kulamada ka horreeya xilli ciyaareedka.
Guud ahaan xiddigaha Barcelona ayaa loo qorsheeyay inay kooxda dib uga soo xaadiraan 14-ka bishan July balse Dembele waxa uu hadaba shaqadiisa ka wataa xerada tababarka ee Sant Joan Despí.
Dhacdadan ayaa noqon karta mid uu Dembele ku muujinayo sida ay uga go’antahay inuu ka faa’idaysto fursada isla markaana uu xilli ciyaareedka soo socda u doonayo inuu ku najaxo kooxda.
Madaxweynaha Barca ee Josep Maria Bartomeu ayaa tiraba dhawr jeer saxaafada horteeda ku difaacay Dembele isaga oo xataa sheegay inuu aaminsan yahay in Dembele uu ka fiican yahay Neymar.
Sidoo kale Dembele ayaa muujinaya inuu ka fogaanayo dhacdooyinkii dhalinyaronimo ee xilli ciyaareedkii hore lagaga cawday ee ay kamid ahaayeen dhafarka badan iyo inuu kasoo daaho waajibaadkiisa kooxda.
Si kastaba ha ahaatee, Talaabadan uu qaadayo da’yarkani ayaa noqonaysa mid kooxda ka farxinaysa walow lala xidhiidhinayay inuu bixi doono oo ay bedelkiisa ula soo saxeexanayo Barcelona Neymar.